July 2012 | IT Sharing Network
Uniblue PowerSuite Pro Update လေးရလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ် နာမည်ကြီး software လေးဖြစ်လို့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ... Syatem Unilities ထဲမှာ Top 10 စာရင်းဝင်ပါပဲ TuneUp တို့ Advanced SystemCare တို့လို ကွန်ပျူတာ ကျန်းမာရေးအတွက် အသုံးပြုတဲ့ software ဖြစ်ပါတယ်... ဒီကောင်လေးမှာတော့ Driver တွေကိုပါ Update လုပ်ပေးနိုင်ပါတယ်... Full Version ဖြစ်ဖို့အတွက် serial key ထည့်ပေးထားပြီး အသေးစိပ်သိလိုလျှင် Home page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... Uniblue PowerSuite Pro လေးကို Install လုပ်ဖို့အတွက် Internet ချိတ်ထားမှ Install လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်....
ဒီကောင်လေးကို အသစ်ထွက်တိုင်း တင်ပေးဖြစ်ပါတယ် ... ကျွန်တော့် အသဲစွဲလေးပါ ကွန်ပြူတာ ကျန်းမာရေးအတွက် System Utility ထဲမှာ ကမ္ဘာ့ top စာရင်းဝင်ဖြစ်ပါတယ် ... Iobite ကထုပ်တာဖြစ်ပြီး Free download အဖြစ် Uninstaller, game booster, Smart Defrag, freeware တို့ကို တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်ပါသေးတယ် ...internet booster နဲ့ registry cleaner/defrag တို့က pro အဆင့်အထိပါဝင်ပါတယ်... internet speed နဲ့ download speed ကိုလည်း အကောင်းဆုံး အခြေအနေတရပ်အထိ တိုးမြှင့်ပေးနိုင်ပါတယ် ... လုပ်ဆောင်ပေးနိုင်တာတွေကတော့ Malware removal, Regisity Fix, regisity Defrag, System Optimization, Startup Optimization, Shortcut Fix, Privacy Sweep, Junk files clean, Security Defense, Disk Scan, Vulnerability Fix, Disk Defragment စတာတွေကို တစ်ချက်နှိပ်ယုံနဲ့ scan and repair တစ်ခါတည်းလုပ်နိုင်ပါတယ် ... Toolbox မှာလည်း Clean, Optimize, repair, Security and Control ဆိုပြီးအသီးသီးပြည့်စုံအောင်ထည့်ပေးထားပါတယ်... Turbo Boost ကိုလည်း on/off လုပ်ပြီး လိုသလိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ် ... ကွန်ပြူတာမြန်ဆန်ကောင်းမွန်စေဖို့ တကယ်သုံးသင့်တဲ့ဆော့ဝဲလ်လေးပါ ... Install လုပ်တဲ့အချိန်မှာတော့ အွန်လိုင်းကို ဖြုတ်ထားပေးရပါမယ် ...ကွန်ပြူတာမြန်ဆန်ကောင်းမွန်ဖို့ သုံးသင့်တဲ့ဆော့ဝဲလ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ...
Any Video Converter Professional update လေးပါ တင်ပေးနေကျဖြစ်လို့ အားလုံးရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ ဒီကောင်လေးလည်း သုံးရတာအဆင်ပြေလို့ ကျွန်တော်လည်း ဒါလေးပဲသုံးဖြစ်ပါတယ်... Function တွေကတော့ converter တို့ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းပေါ့ Full version ဖြစ်ဖို့အတွက် avcdrm.dll ဆိုတဲ့ dll ဖိုင်လေးထည့်ပေးထားပါတယ် copy လုပ်ပြီး Desktop ပေါ်က Any Video Converter Professional လေးကိုထောက် Right click => properties ==> open files location ကိုနှိပ်ပြီး past လုပ်ယုံပါပဲ.. Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ အသေးစိပ်လေ့လာနိုင်ပါတယ်...
တင်ပေးနေကျဖြစ်တဲ့ Any DVD Converter Professional ကို update လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်... အားလုံးလည်း အသုံးပြုတတ်မယ်ထင်ပါတယ် Full version ဖြစ်ဖို့အတွက် key maker ထည့်ပေးထားပြီး အသေးစိပ်လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... key maker ကိုဖွင့်ပြီး Name နေရာမှာ ကိုယ့်နာမည်ကိုထည့် Generate ကိုနှိပ်ပြီး serial key နေရာက key ကူးပြီးထည့်ပေးယုံပါပဲ...
iPhone, iPad, iPod ပိုင်ရှင်များအတွက် PhoneTrans Pro v.1.1.0 (4.9 Mb)
Apple ကထုပ်တဲ့ iPhone, iPad, iPod ပိုင်ရှင်များအတွက် အသုံးဝင်မယ့် PhoneTrans Pro လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်... သူရဲ့ Feature တွေ supports iOS devices တွေနဲ့ Supported file formats ကို အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားသလို Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... Full version ဖြစ်ဖို့အတွက် serial key ထည့်ပေးထားပါတယ်... ကျွန်တော်မှာ iphone မရှိလို့ software လေးတင် serial key လေးထည့်ပြီး full ရမရပဲ စမ်းပေးနိုင်ပါတယ်...
ဒီကောင်လေးက windows, Internet နဲ့ Applications တွေမှာ မလိုလားအပ်တဲ့ History တွေကို ရှင်းပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်... သူရဲ့ Feature တွေကို အောက်မှာဖော်ပြထားပြီး အသေးစိပ်သိလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ Hone Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... Full version ဖြစ်ဖို့အတွက် Reg Key ထည့်ပေးထားပါတယ်...
Animation လေးတွေ အလွယ်တကူလုပ်လို့ရတဲ့ Easy GIF Animator Personal v5.3 (3.8 Mb)
Animation ပုံလေးတွေကို အလွယ်တကူ ဖန်တီးပေးနိုင်တဲ့ Easy GIF Animator လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.... Animation ပုံလေးတွေ စာသားလေးတွေနဲ့ Icon ပုံးလေးတွေပေါ်မှာ စာသားအလှုပ်ကလေးတွေကိုပါ Effect လေးတွေသုံးပြီး ရေးလို့ရပါတယ်... အသေးစိပ်သိလိုတဲ့သူငယချင်းများ Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပြီး Full version ဖြစ်ဖို့အတွက် serial key ထည့်ပေးထားပါတယ်.. key ထည့်တဲ့အခါ internet ကိုဖြုတ်ထားပေးပါ...
Desktop Icon တွေကို စိတ်ကြိုက် အလှဆင်ဖို့ VeBest Icon Groups v2.0.0 (14.06 MB)
Desktop Icon တွေကို စိတ်ကြိုက် အလှဆင်ဖို့အတွက် VeBest Icon Groups v2.0.0 လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်... ဒီလိုဆော့ဝဲလ်တွေတင်ပေးဖူးတဲ့အထဲက ဒီကောင်လေးကို သဘောကျမိပါတယ် ပုံမှာပြထားသလိုပါပဲ Icon လေးတွေကို စိတ်ကြိုက် Group လေးတွေ လုပ်ပြီး အလှဆင်နိုင်သလို နဂို Icon လေးတွေပါ ထည့်ထားလို့ရပါတယ်... Broeser, Player, Game, Converter စသည်ဖြင့် Group လေးတွေကို ကိုယ်ပိုင်စိတ်ကြိုက်လုပ်လို့ရပါတယ်... အသေးစိပ်လေ့လာဖို့အတွက် Home Page ကိုကလစ်ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်.... ကျွန်တော် မူရင်းဆိုက်ကလေးတွေ ထည့်ပေးထားပါတယ် ဒေါင်းလော့မယူမီ အရင်လေ့လာကြည့်ကြပါ...
ဒီကောင်လေးက ဖိုင်ဆိုက်ကလေးလဲသေးပြီး Install လုပ်စရာလည်းမလိုလို့ ကစားချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... စိတ်ရှုပ်လို့ ကိုင်ပေါက်ချင်တာတို့ နပမ်းလုံးချင်တာတို့လို စိတ်အချည်ပေါက်တဲ့အခါ ဒီကောင်လေးကစားပေါ့.. အပြင်မှာဆို ရဲစခန်းနဲ့ နှစ်ပါးသွားနေရမယ် ဒီဂိမ်းထဲမှာ ကြိုက်သလောက်ပေါက်ကွဲလို့ရတယ် စိတ်ပြေနပြေပဲ ပယ်ပယ်နယ်နယ်ကိုင်လို့ရတယ်.... ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့ ဒေါင်းလော့မှ ရလာတဲ့ WWE Raw 2007 PC Ripped လေးကို Run လိုက်ရင် Extract လုပ်ဖို့နေရာရွေးခိုင်းပါလိမ့်မယ်... C ကိုရွေးပေးလိုက်ပါ ပြီးရင် raw 2007 ဆိုတဲ့ဖိုင်လေးရလာပါလိမ့်မယ် အဲ့ဖိုင်ထဲက WWE RAW 2007 ဆိုတဲ့ ဖိုင်လေးကို right click ==> sent to ==> desktop (create shortcut) လုပ်ပြီး ကစားနိုင်ပါပြီ....
Aviosoft Video Converter Professional 5.0.0.5 (35.08 Mb)
Video converter တစ်မျိုးရလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ် converter တွေတင်ပေးထားတာလည်း တော်တော်စုံနေပါပြီ ဒါလေးလည်း အခြား converter တွေလိုပါဘဲ Function တွေလည်း ဒါတွေပါပဲ... Full version ဖြစ်ဖို့အတွက် serial key ထည့်ပေးထားပြီး အသေးစိပ်သိလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်...
အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ software တွေကို အင်တာနက်သုံးမရအောင် ပိတ်ထားမယ် Internet Lock 5.3.2 (703.2 Kb)
အင်တာနက်အသုံးပြုနိုင်တဲ့ software တွေကို အင်တာနက်သုံးမရအောင် ပိတ်ထားလို့ရတဲ့ Internet Lock လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်... Lock လုပ်တဲ့ software တွေရဲ့ ထုံးစံအတိုင်း Install လုပ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲ အသုံးပြုမည့်သူအတွက် Password ထည့်ပေးရပါတယ်... Full Version ဖြစ်ဖို့အတွက် Serial key (3) ခုထည့်ပေးထားပြီး Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ အသေးစိပ်လေ့လာနိုင်ပါတယ်....
languages တွေကို အပြန်အလှန်ပြောင်းလည်းဖော်ပြပေးပြီး အသံထွက်ဖတ်ပေးနိုင်တဲ့ Ace Translator Ace Translator9.5.7.698 (2.1 Mb)
အရင်ကလည်းတင်ပေးဖူးပါတယ် Ace Translator update ရလို့ တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... ဘာအတွက်သုံးတာလည်းဆိုတော့ ( 65 languages ) ဘာသာရပ် 65 မျိုးကို အပြန်အလှန် ပြောင်းလည်းဖော်ပြပေးနိုင်ယုံသာမက (43 languages) 43 ဘာသာကို ( text-to-speech ) အသံထွက်မှန်မှန်ကန်ကန် ဖတ်ပေးနိုင်ပါတယ်... ဥပမာ Chinese ဘာသာမှ English ဘာသာကို အပြန်အလှန် ဖော်ပြပေးနိုင်သည့်အပြင် အသံထွက် ဖတ်ပေးနိုင်ပါတယ်... အဲ့လိုဖတ်ပေးနိုင်သည့်အတွက် Ace Translator မှာအသုံးပြုနိုင်သော (43 languages ) 43 ဘာသာကို မိမိသိလိုတဲ့ စကားလုံး စကားပိုဒ်တွေကို အသံထွက်သိလိုတဲ့အခါ စကားပြော လေ့ကျင့်လိုတဲ့အခါမျိုးမှာ အသုံးပြုနိုင်ပါတယ်.... အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ဘာသာရပ်တွေကို အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပြီး အသေးစိပ်လေ့လာလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... Full version ဖြစ်ဖို့အတွက် patch ဖိုင်ထည့်ပေးထားပြီး patch ဖိုင်အသုံးပြုမယ်ဆိုရင် Antivirus ကို ပိတ်ထားပေးရပါမယ်...
Data တွေကို အခြားသူ မသိအောင် ခိုးယူမရအောင် ကာကွယ်ပေးမယ့် Protection Data Safe Pro Edition V 3.4.10.116 (1.5 MB)
မိမိရဲ့ Data တွေကို အခြားသူ မသိအောင် ခိုးယူမရအောင် ကာကွယ်ပေးမယ့် Protection Data Safe Pro လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... ဒီကောင်လေးမှာ တစ်ခုကောင်းတာ software ဖွင့်ဖို့အတွက် အသုံးပြုမည့်သူက password ပေးထားရသလို မိမိသိမ်းလိုတဲ့ data ကို သူရဲ့ software ထဲမှာ သိမ်းပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်... ဒီအထဲမှာ ဘာတွေသိမ်းထားတယ် ဆိုတာကို ကိုယ်ကလွဲပြီး သိနိုင်မှာ မဟုတ်ပါဘူး.... ဘယ်လိုသုံးရလဲဆိုတော့ မိမိသိမ်းလိုတဲ့ data ကို Drag & Drop ဒီအတိုင်းဆွဲသွင်းလိုက်ယုံပါပဲ... Full Version ဖြစ်ဖို့အတွက် keygen ထည့်ပေးထားပြီး အသေးစိပ်လေ့လာရန် Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်...
Protect your files, folders and passwords in seconds! No chance for hackers and data spies! Outstanding and unbreakable security. Protectorion™ Data Safe protects your confidential data against illegal access via the internet and against the prying eyes of co-users of your PC. Use strong encryption to prevent others from misusing your confidential data and from breaching into your privacy. IT-Security made in Austria - immediately ready to run, fast and easy to use!
မှားဖျက်မိတဲ့ Files တွေကို Recover လုပ်လို့ရတဲ့ Active File Recovery 9.5.4 (14.2 Mb)
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် မှားဖျက်မိတဲ့ Files တွေကို Recover လုပ်လို့ရတဲ့ Active File Recovery ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်... ရှေ့မှာလည်း Recover လုပ်တဲ့ software တွေတင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ် အဆင်ပြေရာ ကြိုကနှစ်သက်ရာရွေးသုံးလို့ရအောင်ပါ... အသေးစိပ်လေ့လာလိုချင်ရင် Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်.... Full version ဖြစ်ဖို့အတွက် Crack ဖိုင်ထည့်ပေးထားပြီး အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းမျာအတွက် jumbofiles, minus ဒေါင်းလော့လင့်နှစ်ခုတင်ပေးထားပါတယ်...
မှားဖျက်မိတဲ့ Files တွေကို Recover ပြန်လုပ်ပေးမယ့် PC Tools File Recover 9.0.1.221 (12.8 Mb)
မှားဖျက်မိတဲ့ Files တွေကို Recover ပြန်လုပ်လိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် PC Tools File Recover ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်... Full version ဖြစ်ဖို့အတွက် serial key ထည့်ပေးထားပြီး အသေးစိပ်လေ့လာဖို့အတွက် Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ jumbofiles, minus download link နှစ်ခုထည့်ပေးထားပါတယ်....
PC Tools File Recover isasafe, affordable and easy-to-use file recovery solution, designed to recover and restore deleted files from hard drives, floppy drives and other types of fixed media. The software helps restore lost music, photos, and other documents lost to accidental deletion or corruption. These files may be lost by emptying the Recycle Bin, or using other deletion actions that bypass the Recycle Bin altogether. Such actions include Windows Shift-Delete, command line deletion, deleting excessively large files or using applications that delete files without the Recycle Bin. File Recover includes options to help you quickly find your lost files. Runaquick scan for files that may have just recently been deleted, oradeep scan for harder-to-recover items. A physical scan that meticulously combs through your hard drive is also included for severely damaged media. File Recover utilizesarapid scan engine to scan and restore your documents from your hard drive, usually within minutes!
Cover ဒီဇိုင်းတွေကို စိတ်ကြိုက်ဆွဲဖို့ TBS Cover Editor 2.4.3.295 (42.3 Mb)
Cover ဒီဇိုင်းတွေကို စိတ်ကြိုက်ဆွဲချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် Create 3D box shots, DVD Cases, Member Cards, CD and book covers တွေကို အလွယ်တကူ စိတ်ကြိုက်ဆွဲလို့ရတဲ့ TBS Cover Editor လေးကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်.... အသေးစိပ်လေ့လာဖို့အတွက် Home Page ကို click ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပြီး အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် jumbofiles, minus ဒေါင်လော့လင့်နှစ်ခု ထည့်ပေးထားပါတယ်.... jumbofiles မှာ ဖိုင်တွေတင်နေကျ အကောင့်တစ်ခု အဖျက်ခံလိုက်ရလို့ တစ်ချို့တင်ထားတာတွေ ပါသွားပါတယ် လိုချင်တာရှိလို့ လင့်သေနေရင် Cbox မှာဖြစ်ဖြစ်ရေးခဲ့ပါ ကျွန်တော့်မှာရှိသေးရင် ပြန်တင်ပေးပါ့မယ်...
အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်ပဲ ကွန်ပျူတာရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်းဖြစ်တဲ့ Registry အပိုင်းကို ပြုပြင်ရှင်းလင်းတဲ့ နေရာမှာ နာမည်ကြီး PC Tools Registry Mechanic လေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ယူသွားနိုင်ပါတယ်.....
Internet Download Manager 6.12 Betal7+4Patch (5.1 Mb)
ထုံးစံအတိုင်း IDM 6.12 Betal Build7Update လေးရလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ် ဒီကောင်လေးမှာ patch4ခုထည့်ပေးထားပါတယ် ကြိုက်တာရွေးသုံးပါ... အရင်တင်ထားတဲ့ IDM ကို Uninstall လုပ်ဖို့မလိုပါဘူး..... idman612b.exe ကို Run လိုက်ပါတယ်... ထုံးစံအတိုင်း next ...... Next .... Finsh ပေါ့ဗျာ... အဲ့အတိုင်းပြီးသွားပြီဆိုရင် IDM ကိုမဖွင့်သေးပဲ patch ဖိုင်ကို ထုံးစံအတိုင်း patch ခြိုးပေးလိုက်ပါတယ်... အားလုံးအေးဆေးပဲပြီးသွားပါတယ် ဒေါင်းလက်စတွေလည်း မပျက်ပါဘူး Betal7လည်းဖြစ်သွားပါတယ်...မိမိအသုံးပြုနေတဲ့ Internet Download Manager ကို Download speed အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင် မြှင့်တင်ပေးနိုင်တဲ့ IDM OPTIMIZER (297.85KB) မရှိသေးတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အသုံးလိုမယ်ဆိုရင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... လက်ရှိသုံးနေတဲ့ Internet Download Manager ကို update လုပ်ပြီး မိမိကိုယ်တိုင် crack လုပ်သုံးလို့ရတဲ့ IDM cracker tool (438.20KB) ကို အသုံးပြုလိုလျှင် ဒီမှာ ယူနိုင်ပါတယ် .... Internet Download Manager ကို patch ဖိုင်ဖြင့် full version ဖြစ်အာင်ပြုလုပ်အသုံးပြုပုံကို ဒီလင့် မှာ တင်ပေးထားပါတယ်.... Registry ထဲကနေ Internet Download Manager ကို download speed မြှင့်တဲ့နည်းကို ဒီမှာ ကြည့်နိုင်ပါတယ် .... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်က Link မှာ ဒေါင်းလုပ်ရယူနိုင်ပါပြီဗျာ။
Windows အတက်မှာ မလိုအပ်တဲ့ Program တွေကြောင့် အတက်နှေးနေရင်
Windows အတက်မှာ မလိုအပ်တဲ့ Program တွေကြောင့် အတက်နှေးနေရင် System Configuration ထဲမှာ ပြင်ပေးရပုံလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်... ကျွန်တော့် Blog ကရေးတာမကြာသေးတော့ တစ်ချို့ အပိုင်းတွေကို မရေးဖြစ်ပဲ ယခု Update လေးတွေကိုသာ ဦးစားပေးတင်ဖြစ်နေတာပါ... ဒီနည်းလမ်းတွေက တော်တော်များများသိပြီးသားဖြစ်မှာပါ... ခုဏပို့မှာတင်ခဲ့သလိုပါပဲ win key + R (သို့) Run ကိုဖွင့်ပြီး msconfig လို့ရိုက်ပြီး ok နှိပ်ပါ...
Windows2ခုတင်ထားလို့ Start Up မှာ အသုံးပြုမည့် windows ကိုရွေးပေးနေရရင်
Win 8 ရော Win7ရော တင်ထားတဲ့ သူငယ်ချင်းများ Start Up မှာ အသုံးပြုမည့် win ကိုရွေးပေးစရာမလိုပဲ မိမိအသုံးပြုလိုတဲ့ ၀င်းဒိုးနဲ့ တက်စေချင်ရင် System Configuration ထဲမှာ ပြင်ပေးရပုံလေးကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်... win 8 ကိုစမ်းသုံးချင်လို့ ပထမတင်ထားတဲ့ win7ကိုမဖြုတ်ပဲ လက်ရှိအသုံးပြုနေတဲ့ C,D,E (မည့်သည့်အပိုင်းမဆို) မှာပဲဖြစ်ဖြစ် ဟတ်ဒစ် နှစ်လုံးသုံးထားပြီး တင်တာပဲဖြစ်ဖြစ် ကွန်ပျူတာတစ်လုံးထဲမှာ ၀င်းဒိုးနှစ်ခုတင်သုံးတဲ့အခါ Start Up မှာ ကိုယ်တက်ချင်တဲ့ဝင်းဒိုးကို ရွေးပေးရပါတယ် မရွေးပေးမိရင် win 8 နဲ့ တက်သွားလို့ restart ပြန်ခေါ်ပြီး ရွေးရွေးပေးနေစရာမလိုအောင် ပထမဆုံး win key + R (သို့) Run ကိုဖွင့်ပြီး msconfig လို့ရိုက်ပြီး ok နှိပ်ပါ...
Click တစ်ချက်နှိပ်ယုံနဲ့ အားလုံးကိုရှင်းမယ့် JetClean Pro 1.3.0.112 (3.4 Mb)
JetClean ကိုသုံးပြီးကတည်းက Ccleaner တောင်သိပ်မသုံးဖြစ်တော့ပါဘူး သုံးဖူးတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေကတော့ ဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာ သိကြမှာပါ... ဒီကောင်လေးမှာ Regisity Clean, Window Clean, Apps Clean, Shortcusts Clean, RAM Clean တို့ပါဝင်တဲ့အပြင် Sistem Information ကိုအလွယ်တကူကြည့်နိုင်ခြင်းအပြင် Uninistaller, Startup Optimization, Regisity Defrag, Internet Booster,Performance Booster တို့ ပါဝင်တဲ့အပြင် ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ယုံနဲ့ scan & repair လုပ်နိုင်ပါတယ်... Pro ဖြစ်ဖို့အတွက် လိုင်စင်ကီးထည့်ပေးထားပါတယ် .. သူရဲ့ Feature တွေကို အောက်မှာဖော်ပြပေးထားပြီး အသေးစိပ်လေ့လာဖို့အတွက် Home Page ကို ckick ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်...
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း ဆောင်ထား ဖတ်ရှု မှတ်သားသင့်သော ပိဋကတ်(၃)ပုံမြန်မာပြန် (33.5 MB)
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တိုင်း ဆောင်ထား ဖတ်ရှု မှတ်သားသင့်သော ပိဋကတ်(၃)ပုံမြန်မာပြန် စာအုပ်ကလေးကို တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... ဒီစာအုပ်ကို အမျိုးကောင်းသား Blog က တွေ့လို့ ကျွန်တော့် Blog က မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများအတွက် ပြန်လည်မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်..... မိမိအပါအ၀င် မိသားစုဝင် သူငယ်ချင်း မိတ်ဆွေများပါ ဖတ်ရှုလေ့လာနိုင်အောင် ဒေါင်းလော့ယူထားပြီး အခြားသူများကို ပြန်လည်မျှဝေပေးခြင်းဖြင့် သာသနာပြုကြပါ လို့ တိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်... mediafire jumbofile minus ဒေါင်းလော့လင့် သုံးနေရာတင်ပေးထားပါတယ် အဆင်ပြေတဲ့လင့်ကနေ ယူသွားနိုင်ပါတယ်...
Uninstaller တွေထဲမှာ ဒီကောင်လေးကို ပိုကြိုက်ပါတယ် win 7, win 8, win vista and xp တွေမှာအသုံးပြုလိုရပြီး interface နဲ့ ပေးထားတဲ့ function တွေကလဲ တကယ်ကြိုက်နှစ်သက်စရာပါပဲ.... အသေးစိပ်လေ့လာဖို့အတွက် Home Page ကိုကလစ်ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်...
Advanced Uninstaller PRO is the ultimate uninstaller for Windows, allowing you to uninstall programs quickly and completely using its simple and intuitive interface.No need to worry about stubborn programs ever again!
Andrid ပေါ်မှာ IDM သုံးချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
Karaoke Sound Tools 1.0.15 Full - Vocal Remover (8.2 MB)
ဒီကောင်လေးကတော့ မိုကခဲများအတွက် ဖြစ်ပါတယ် ကိုယ်ကြို့က်တဲ့ ဆိုချင်တဲ့သီချင်းတွေကို vocal သံဖျောက်လို့ရတဲ့အပြင် Key changer နဲ့ Tempo changer (အနှေး-အမြန်) တွေကိုပါ စိတ်ကြိုက်ပျောင်းလို့ရပါတယ်... ၀ါသနာရှင်များ အောက်ကလင့်မှာ ယူသွားနိုင်ပါတယ်....
Karaoke Sound Tools isasoftware package for karaoke audio processing. It contains three modules:
Audio အတွက် Format မျိုးစုံပြောင်းပေးနိုင်တဲ့ Bigasoft Audio Converte 3.7.2.4 ကိုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်... အရင်ကလည်း Bigasoft ကထုပ်တဲ့ Converter တွေ တင်ပေးဖူးလို့ ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မှာပါ... အသေးစိပ်ကို Home Page ကို ကလစ်ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်နိုင်ပါတယ်... Full Version ဖြစ်ဖို့အတွက် serial key ထည့်ပေးထားပြီး အသုံးပြုလိုတဲ့သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ယူသွားနိုင်ပါတယ်...
ဒီကောင်လေးက Desktop အလှဆင်လိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... ပုံမှာပြထားသလိုပါပဲ3dimension တို့ Desktop Icon လေးတွေကို စိတ်ကြိုက် လှည့်တာ ရွှေ့တာတွေပါလုပ်လို့ရပါတယ်... အသေးစိပ်ကို Home Page ကိုကလစ်ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်...
Real Desktop -aprogram to change the look of the desktop Windows, which transforms it into 3-dimensional surface. Real Desktop breathes new life into your desktop and turn it intoareal real desktop. Enjoyanaturalness and incredible graphics and dynamic sound. The program uses DirectX, hasaphysics engine, but the speed of your computer is not strongly affected. After installation, just click on the shortcut - and you have 3D desktop! Deactivated in the same way.
ကွန်ပျူတာရဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်းဖြစ်တဲ့ Registry ကို Clean လုပ်ပေးခြင်း၊ Disk Clean လုပ်ပေးခြင်း၊ Traces Removal စသည့်တို့ပါဝင်ပါတယ်... အသေးစိပ်လေ့လာဖို့အတွက် Home Page ကိုကလစ်ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်.... Full version ဖြစ်ဖို့အတွက် keygen maker ထည့်ပေးထားပြီး စမ်းသုံးချင်တဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ယူသွားနိုင်ပါတယ်...
အသုံးလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများအတွက် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်...
Keylogger အကြောင်းကို ဒီလင့်မှာ တင်ပေးခဲ့ဖူးပါတယ်... Gmail, Facebook Password စသည်ဖြင့် ကွန်ပျူတာမှာ လုပ်သမျှကို မှတ်သားပေးထားနိုင်ပါတယ်... Full Version ဖြစ်ဖို့အတွက် Crack ဖိုင်ထည့်ပေးထားပါတယ်... Crack ဖိုင်ထည့်ပြီးတဲ့အခါမှာ register Key ကိုထည့်တဲ့အခါ ရိုက်ချင်ရာရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါ... ဒီ keylogger လေးကို Install လုပ်ပြီးသွားတဲ့အခါ အသုံးပြုမည့်သူအတွက် password တောင်းပါလိမ့်မယ် ကိုယ်ဖွင့်ချင်တဲ့အခါ ပေးထားတဲ့ password ကိုထည့်ပေးမှဖွင့်လို့ရမှာပါ... ဒီကောင်လေးကို ဖွင့်မယ်ဆိုရင် keylogger Icon လေးကိုထောက် Shift key ကိုဖိထားပြီး ဖွင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်.... အသေးစိပ်လေ့လာဖို့အတွက် Home Page ကိုကလစ်ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်... အသုံးပြုလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ အောက်ကလင့်မှာ ယူသွားနိုင်ပါတယ်...
ဒီကောင်လေးက Mp3 ဖိုင်တွေမှာ Title, Artist, Album, Year, Track, Genre, Comment တို့ ရေးထားတာတွေ တွေ့ဖူးကြမှာပါ... မိမိ Mp3 သီချင်းတွေကို ခွေနာမည်၊ အဆိုတော်နာမည်၊ သီချင်းရေးဆရာ စသည်ဖြင့် အညွှန်းတွေ ထည့်လို့ရပါတယ်... Home Page ကို ကလစ်ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်...
Uninstaller တွေတော်တော်များများ တင်ပေးခဲ့ပြီးပါပြီ Total Uninstall Pro Update လေးရလို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်... ဖြုတ်မရတဲ့ software တွေရှိရင် uninistaller တွေသုံးပြီးဖြုတ်ရပါတယ်.... ၀င်းဒိုးမှာပေးထားတဲ့ uninstall လုပ်တာထက် uninistaller သုံးပြီးဖြုတ်တာက ပိုပြီးပြည့်စုံကောင်းမွန်ပါတယ်... မိမိဖြုတ်လိုက်တဲ့ software ရဲ့ Data တွေ မလိုအပ်တော့တာတွကို ကုန်စင်အောင်ရှင်းလင်းပေးနိုင်ပါတယ်... အသေးစိပ်သိလိုတဲ့ သူငယ်ချင်းများ Home page ကိုကလစ်ပြီး မူရင်းဆိုက်မှာ လေ့လာနိုင်ပါတယ်....
Read more...5comment
ငယ်ငယ်တုန်းက အရမ်းကြိုက်ခဲ့တဲ့ game လေးပါ ကို အမျိုးကောင်းသား ဆိုက်မှာ တင်ထားတာတွေ့တာနဲ့ အပြင်းပြေကစားဖို့ဒေါင်းထားလိုက်တာပါ.... ကျွန်တော်လို ကစားချင်းတဲ့သူငယ်ချင်းများ ရှိရင် အောက်ကလင့်မှာ ယူသွားနိုင်ပါတယ်... အဲ့လို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး Game လေးတွေကို ကစားချင်တယ်ဆိုရင် www.gametop.com မှာ ရယူနိုင်ပါတယ်....
Supported Operating Systems တွေကို အောက်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်...
Youtube က အခုနောက်ပိုင်းမှာ တိုးချဲမှုတွေဖြည်းဖြည်းခြင်း လုပ်နေတာကို သတိထားမိမှာပါ။ Live Streaming, movies စသည့်ဖြင့်နဲ့ interface တွေလဲ ပြောင်းလာပါတယ်။ အခု ထက်ထွတ်လာတဲ့ Tool လေးကတော့ Youtube video manger မှာရှိတဲ့ Editing လုပ်တဲ့နေရာမှာ ကိုယ့်ရဲ့တင်မဲ့ video ထဲက လူတွေရဲ့ မျက်နှာကို ၀ါးလို့ရတဲ့ tool လေးပါလာပါတယ်။ အထူးသဖြင့် သတင်းသမားတွေ ဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းတခုခု၊ ဆန္ဒပြတာ တခုခုကို ချက်ချင်းတင်ခြင်တဲ့ အခါမှာ Video editing software တွေကနေတဆင့် လုပ်စရာမလိုတော့ဘဲ Youtube မှာ ချက်ချင်းတင်ပြီး ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့ မျက်မှာကို ၀ါးထားလို့ရပါပြီး ဒီလိုလုပ်ချင်းက ဆန္ဒပြသူရဲ့ အပေါ်မှာအများကြီးအကျိုးသက်ရောက်မှု ရှ်ိပါတယ် သေရေး၊ရှင်ရေးတောင် ဖြစ်သွား နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် Youtube က အခုထုတ်လိုက်တဲ့ face blurring tool လေးကို အကျိုးရှိရှိ အသုံးပြုကြတာပေါ့။